အပေးနဲ့အယူ – Pann Satt Lann Books
▪️ လောကကြီးထဲမှာ လူ့ဘ၀ရတုန်းခဏမှာ အချစ်၊ လုပ်ငန်း၊ ငွေကြေး၊ ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စားဝတ်နေရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး… ဘယ်ကဏ္ဍပဲဖြစ်ဖြစ် အရာရာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြဖို့၊ အရာရာ အကောင်းဆုံးတွေဖြစ်ဖို့အတွက် စေတနာထားတဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အချစ်လေးတွေနဲ့ လူသားတိုင်းချစ်ကြဖို့ အရေးအကြီးဆုံးပါ။ ဒါကြောင့်… တုံ့ပြန်မှုကောင်းကောင်း လိုချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း အကောင်းဆုံးပေးပါ။ ကိုယ့်ကိုချစ်စေချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း ချစ်ပြပါ။ ကိုယ်က ရယူလိုချင်ရင် ကိုယ်က ပေးဆပ်ပါ။ အရေးအကြီးဆုံးက… အပေးနဲ့ အယူ မျှတကြဖို့ပါ
▪️ အပေးအယူမျှတဖို့ ကိုယ့်ဘက်က ဘာတွေလုပ်ရမလဲ၊ ဘာတွေပြောရမလဲ၊ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ…. ကိုယ်ကမုန်းရင် အမုန်းရမှာမလွဲပေ။ ဒါတွေအားလုံး ဒီစာအုပ်ထဲမှာ တွေ့ကြုံခံစားရသမျှ ရေးချထားပါတယ်ဗျာ။ (စာရေးသူ အမှာစကားမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်)
▪️ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ရုပ်ရှင်၊ စာပေ နယ်ပယ်စုံမှာ တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးပြီး အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအခေါ်၊ စိတ်ဓာတ်ရင့်သန်သူ နိုင်ငံကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးမောင် (ကျော်သူ)၏ တွေးခေါ်ရေးသားမှုတွေ၊ ဆုံးမလမ်းညွှန်မှုတွေကို သူ့ဘ၀အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်တွဲပြီး ဖတ်ရှုရမယ့် စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
5.2 × 0.3× 8.3 inches
ဆန်းစသော်တာစာပေ၊ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ၊ (ပ-ကြိမ်)
“အပေးနဲ့အယူ” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply